5 Astaamood oo Muhiim ah oo laga Raadinayo Foomka Dhismaha Foomka Onlineka ah | Martech Zone
Haddii aad raadineyso hab fudud, wax ku ool ah, oo ammaan ah oo aad ku ururin karto macluumaadka aad uga baahan tahay macaamiishaada, mutadawiciintaada, ama rajadaada, fursadaha ayaa ah in foom sameeyaha khadka tooska ah uu kordhin karo wax soo saarkaaga si xawli ah. Adiga oo ka fuliya foomka internetka foomka ah ee ururkaaga, waxaad awoodi doontaa inaad iska dhaafto geeddi-socodka buug-gacmeedyada waqti-lumiska ah oo aad keydiso waqti, lacag, iyo ilo ku filan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr qalab oo halkaa ka jira oo laga kala dooran karo, oo dhammaantood maahan dhismaha foomka internetka loo abuuray si siman. Qoraalkan qoraalka ah, waxaad ku baran doontaa shanta astaamood ee waajibka ah ee ay tahay inaad diiradda saartid markaad dooranaysid foom sameeyaha khadka tooska ah ee ururkaaga.
Muuqaalka 1: Foomamka iyo Jawaabaha aan Xaddidnayn
Haddii aad u shaqeysid ganacsi yar ama shirkad weyn, waxaad u baahan doontaa inaad doorato foom sameeye khadka tooska ah ah iyo madal xog ururin ah oo kuu oggolaanaysa inaad dhisto foomam fara badan oo aad u ururiso jawaabo badan oo foom ah inta aad u baahan tahay. Qalabyo badan oo halkaa yaal ayaa furka dulsaaraya tirada foomamka aad dhisi karto ama tirada jawaabaha aad ururin karto, taasoo sababi karta khalkhal gelin ka badan inta ay xalliso.
Ka dib markaad bilowdo inaad ka faa'iideysato foomamka khadka tooska ah ee loogu talagalay kiisaskaagii hore ee loogu talagalay, waxaad u badan tahay inaad ogaatid xitaa siyaabo waxtar leh oo aad ugu adeegsan karto iyaga oo aanad horay uga fikirin. Sababtaas awgeed, waa fikrad wanaagsan in la hubiyo waqti ka hor in qaab dhisahaagu uu awoodi doono inuu la qabsado baahiyahaaga mustaqbalka. Waqtiga fog, dhisaha qaab aan xadidnayn ayaa ah kan la qiyaasi karo, ka kalsoonida badan, iyo ikhtiyaarka wax ku oolka ah.
Muuqaalka 2: Aag ballaaran oo Awoodda Is-dhexgalka
Ujeedada ugu weyn ee dhismaha foomamka iyo aruurinta jawaabaha khadka tooska ah waa fududeynta howlaha ganacsiga. Si aad tallaabadaas u sii qaadatid, waxaa muhiim ah in la doorto qaab dhisme khadka tooska ah ku habboon oo la jaan qaadaya aaladaha iyo teknoolojiyada aad horay u isticmaashay. Foomamka isku-dhafan ee isku-dhafan ayaa si otomaatig ah ugu xirmi kara nidaamyadaada kale, iyagoo kaa badbaadinaya xitaa waqti iyo dadaal dheeri ah.
Haddii aad isticmaasho CRM sida Salesforce, raadi barxad qaab foom ah oo leh a awood badan, isdhexgalka Salesforce oo adag. Foomamka onlaynka ah ee ku xidhan Salesforce waa la sii diyaarin karaa si loo kordhiyo adeegsadaha-saaxiibtinimada, sidoo kale waa la cusbooneysiin karaa, kor loo fiirin karaa, loona abuuri karaa walxo caadiya iyo kuwa caadiga ah Salesforce. Awoodahani waxay kordhin karaan waxsoosaarka waxayna wax ka beddeli karaan hababka ururada.
Tusaale ahaan, markii Ururka Dhallinyarada ee Kentucky YMCA la korsaday Salesforce, xubnaha shaqaalaha ayaa ku soo qaatay Foomka 'Assembly' hal meel oo kala guur ah. Sidaas oo kale waxay u oggolaatay hay'adda in ay gaarto in ka badan 10,000 oo arday sannad kasta iyada oo loo marayo isdhexgalka Salesforce. Awooda uruurinta iyo adeegsiga xogta nadiifka ah, abaabulan ee Salesforce waxay u ogolaaneysaa kooxda inay si wanaagsan u taageeraan bulshadooda.
Sidoo kale, iskudhafka Google, Mailchimp, PayPal, iyo aalado kale ayaa ka dhigi doona xog uruurinta mid aan hagaagsaneyn shaqaalahaaga iyo macaamiishaada.
Muuqaalka 3aad: Amniga iyo U hogaansanaanta
Haddii aad ka ururinayso xogta macaamiisha, shaqaalaha, bukaanka, mutadawiciinta, ama rajooyinka, amniga iyo u hoggaansamida waa gorgortan la'aan. Xulo foom dhisme iyo madal xog ururin oo u hoggaansamaya sharciyada asturnaanta xogta ee adiga iyo macaamiishaada khuseeya, sida HIPAA, GDPR, GLBA, CCPA, PCI DSS Level 1, iyo kuwo kale. Markaad doorato barxad u hoggaansamaysa, kaliya ma ilaalinaysid xogta aad soo ururiso, laakiin sidoo kale waxaad dhiseysaa kalsoonida iyo kalsoonida macaamiishaada.
Si aad foomamkaaga iyo jawaabahaaga uga dhigto kuwo ammaan ah, ka raadi sirta nasashada iyo tareenka. Sidoo kale, hubi in barxaddaadu leedahay xulashooyin lagu ilaalinayo xogta aadka xasaasiga u ah markii loo baahdo. Iyada oo tallaabooyinkan nabadgelyadu ay jiraan, waxaad ku kalsoonaan doontaa in dhammaan xogta aad soo ururiso ay ku sii jiraan gacanta midig.
Muuqaalka 4aad: Dabacsanaanta iyo Habeynta
Markaad dooranaysid qaab dhisme, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad hubiso inaad awood u yeelan doonto inaad qaabeysato foomamkaaga si aad ula kulanto baahiyahaaga gaarka ah. Halkii aad dagi lahayd foomamka ay adagtahay in la dhiso, dooro madal bixisa noocyo kala duwan oo habeyn la isku habeyn karo si ay kaaga caawiso inaad ku bilowdo lugta midig.
Qaab dhisme wanaagsan iyo xog aruurinta xogta ayaa fududaan doonta in la isticmaalo iyadoo aan loo eegin awooddaada farsamo. Si loo hubiyo in asxaabtaada kooxdu ay awoodaan inay helaan foomam oo ay si dhakhso leh u ordaan iyagoo aan ku tiirsanayn kooxdaada IT-ga, dooro mid bixiya lambar aan lahayn, is-dhexgal saaxiibtinimo leh. Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo si loo hubiyo inaad awood u yeelan doonto inaad shakhsiyeeyo qaababka qaabeynta iyo naqshadeynta si aad ula mid noqoto sumcadda shirkaddaada waayo-aragnimo isticmaale aan xuduud lahayn.
Muuqaalka 5aad: Taageerada Macaamiil ee Lagu Kalsoon Yahay
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan ugu yaraan, hubso inaad dooraneyso qaab-dhismeedka websaydhka oo lagu kalsoonaan karo taageero macaamiisha kooxda haddii ay dhacdo inaad waligaa wax su'aalo ah ka qabtid, walaac, ama aad qabato. Waxay kuxirantahay nooca xogta aad aruurineysid, waxaad ubaahnaan laheyd inaad ka fiirsato doorashada ikhtiyaariyada bixisa taageerada mudnaanta leh haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah. Si ururkaagu u helo garaacista ugu badan ee ganacsigiisa, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in kooxdooda macaamiisha ah ay diyaar u yihiin oo ay diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan wixii caqabado ah ee jira.
Qaar ka mid ah barnaamijyadu waxay bixiyaan taageero hirgelin iyo tababarro si ay uga caawiyaan macaamiisha inay la baxaan mashaariicda waaweyn, taas oo faa'iido badan u yeelan karta mustaqbalka fog. Haddii aad haysato kiis isticmaalkiisu aad u adag yahay oo aad u baahato xoogaa caawimaad ah markaad kor u kacdo oo aad ordo, taageerada hirgelinta ayaa ah fure u ah inaad raadiso.
Markaad halkaa ku sugan tahay oo aad raadineyso qaab dhismeedka tooska ah ee tooska ah ee tooska ah ee internetka iyo xog aruurinta xogta si loo habeeyo qulqulka shaqada ee ururkaaga, hubi inaad maskaxda ku hayso shantan astaamood ee muhiimka ah.
Foomka Abaabulka waa dhisme qaab dhan-ah iyo madal xog ururin ah oo bixisa dhammaan astaamahan iyo waxbadan. Kumaan kun oo ururro ah dhammaan warshadaha waxay adeegsadaan iskudhafka adag ee FormAssembly, heerarka sare ee amniga iyo u hoggaansanaanta, iyo qaab dhisme qaab fudud oo loo adeegsado si loo xalliyo dhibaatooyinka ururinta xogta loona fududeeyo howlaha adag.
Eeg Foomka Isku-xidhka tooska ah ee tijaabada bilaashka ah, looma baahna kaarka deynta. Isticmaal Martech Zonesicir-dhimista lammaanaha leh lambar DKNEWMEDFA20.
Tijaabinta Bilaashka ah ee Foomka Isku-xidhka
Tags: ccpawaafaqsanaantaxog aruurintaqaab dhismeqaababka dhismahaqaabayntaGDPRGLBAgoogleHIPAAdhismaha foomka internetka
Rachel Skroback waa Qoraa Mawduuc ka ah Iskuulka FormAssembly.
Acquire.io: Istaraatiijiyad Hawlgelinta Macaamiisha Midaysan